Usoro ọmụmụ French - ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI na Canada
Na-akparịta ụka na anyị, kwadoro site na LiveChat
Gịnị kpatara BLI?
BLI akụkọ ihe mere eme
Nkwenye na ndi otu
Mmemme nke abalị
Ụlọ akwụkwọ isi na ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Ebe obibi ụmụ akwụkwọ
Ebe obibi ọzọ
Ghọọ ezinụlọ gị
Ndụ ụmụ akwụkwọ
Ihe gbasara mmekọrịta
Ụbọchị mbụ nke ọmụmụ
Visa & CQ
Iwu ulo akwukwo
Debanye aha na akara
Ọnọdụ Ndebanye aha
Mkpụrụ Akwụkwọ Mmụta Mmụta
Ndebanye aha nke abalị
Bụrụ onye na-elekọta gị
Nwale Ule French
Nyocha nke Egere
Usoro ọmụmụ French
Ị chọrọ ịma ụgwọ anyị?
Bụrụ onye mmụta
Deba aha ugbu a
A na-emepụta ọmụmụ ihe French zuru ezu BLI maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịme ka ha nwekwuo ezi na nghọta mgbe ha na-asụ French. Ma ịchọrọ ịmụta French maka ọrụ, njem, ụlọ akwụkwọ, maọbụ maka obi ụtọ, BLI ga-enyere gị aka imezu ihe mgbaru ọsọ gị.
BLI na-enye usoro dị iche iche nke asụsụ iji kwado mkpa nke onye mmụta ọ bụla. Site n'usoro ihe omume na mmemme dịgasị iche, anyị nwere ike ịnabata gị site na nkwurịta okwu bụ isi site na nkuzi agụmakwụkwọ dị elu site na itinye ihe mmụta dị omimi nke ndị nkụzi nwere ahụmahụ ghọtara na ị na-akpali akpali na ọchịchọ gị.
General French ọmụmụ
13 ọkwa nke nkuzi
Site na isi na Advanced
(Ụmụ akwụkwọ 12 kwa otu)
Nhọrọ nhọrọ dị iche
kpụ ọkụ n'ọnụ
Kwa ụbọchị bilingual
Nyocha 18 kwa izu
Usoro mmemme oge ahụ na-enye gị ohere iji nyochaa ma na-eme akụkụ nile nke mmụta asụsụ, na-ekpuchi nkà anọ dị iche iche (ịgụ ihe, ide ihe, ikwu okwu na ige ntị), asụsụ na okwu. Ntughari a bu ihe omuma ma kpoo klas iji di ike na itinye aka.
Nyocha 24 kwa izu
Na-ekpuchi nkà anọ (ịgụ, ịde, ikwu okwu na ige ntị), asụsụ na okwu n'asụsụ a na-amụrụ ihe na nkwurịta okwu, ị ga-enwe ohere iji zụlite ma ọganihu na nzi ezi site na ogbako kwa ụbọchị nke e mere iji mee ka asụsụ ahụ sie ike ị mụọ ihe n'ụtụtụ.
Nyocha 30 kwa izu
Maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmụrụ asụsụ ha na ọkwa ọzọ, nhọrọ a na-eme ka nkà na asụsụ na-elekwasị anya na ohere iji zụlite na mpaghara ụfọdụ. Site na nchikota ihe omumu na ihe ndi omenala, i gabu akuku nke klas nke nwere ezi ihe mgbaru n'uche n'olu ebe ndi ozo eji eme ihe n'asusu ndi ozo.
Nyocha 35 kwa izu
Klaasị kpụ ọkụ n'ọnụ na-aga n'ihu n'ihu! N'ebe a, ị ga - arụ ọrụ nke ọma na onye nkụzi gị na ndị dị nta ka ha nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị n'èzí ụlọ akwụkwọ. Ị nwere ike ịmụta nkà ndị a na-enyefefefe dị ka otu esi esi gosipụta ihe ngosi dị irè ma na-emetụ n'ahụ, ma ọ bụ ịkwalite ọrụ gị site n'ịmụ International Business French ma ọ bụ Nyocha Nkwado; ya na usoro mmemme siri ike, ị na-amụ ihe karia nani asụsụ!
Ịhụ Asụsụ Abụọ zuru ezu
Nyocha 42 kwa izu
Ị ga-amụ ma French ma Bekee n'otu oge ahụ! Otu ụbọchị ga-agụnye 6 iche iche iche, nkewa kewara n'etiti French na Bekee. Dabere na mkpa nke onye a na-amụrụ ihe, ọkwa nke onye a na-amụrụ ihe, na ọkwa ogo, ha na-eji Bekee ma ọ bụ French na mpaghara atọ mbụ ahụ, wee gbanwee mpaghara atọ ikpeazụ. Ha ga-enweta ntụziaka na nkà niile 4 (ịgụ ihe, ide ihe, ikwu okwu na ige nti), yana asụsụ na okwu ndị dị n'ime nkuzi ọ bụla, n'asụsụ abụọ ahụ. Ụkpụrụ ahụ ga-anọgide na-ekwurịta okwu ma na-etinye akwụkwọ na-amụ ihe n'ụbọchị.
Okwu mkparịta ụka
Na klas a, ị ga-enyocha ihe ọmụmụ echiche dị mma maka ọkwa gị; mgbe niile na gburugburu ya nakwa site na isiokwu dị mma. Ntughari a bu ihe ndi mmadu na ndi mmadu na-ekwu okwu, enwere otutu ohere ichoputa ma tinye asusu a.
Ngwakọta dị n'ime
Na klas a, ị ga-enwe ohere ịme nkà nke asụsụ anọ: ige ntị, ikwu okwu, ịgụ na ide. A na-ejikarị asụsụ na okwu mee ihe n'ime ihe ọ bụla na ụzọ nyocha bụ Ntụle Na-aga n'ihu.
Nkwurịta okwu nkwurịta okwu
N'ebe a, ị ga-enwe ohere itinye ihe niile ị na-amụta na mbido abụọ mbụ ahụ n'ọrụ! Nke a na-elekwasị anya na nkwurịta okwu na ọhụụ, a na-emekwa ihe ndị ahụ iji bụrụ ihe na-atọ ọchị ma dị egwu.
Akwụkwọ a na-elekwasị anya otu nkà (ntị, ikwu okwu, ịgụ ma ọ bụ ide ihe) site na oru ngo na Ịme Ihe Ịmụ Ọrụ. Ị nwere ike na-arụ ọrụ ịde ederede site n'ịmepụta akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ mepee ikike ige ntị site n'ịchọgharị ụwa ma ọ bụ redio na pọdkastị.
Nke a bụ ohere ịmụta French maka Ebumnuche Ụfọdụ. Ị nwere ike inyere aka ndị ọkachamara gị site na ịchụ International Business French, ma ọ bụ nweta Nghọta ndị nwere ike ịfefe dị ka otu esi enye nkọwa dị irè!
70, rue Notre-Dame O., 400 Suite
Montreal, QC, Canada, H2Y 1S6
763, rue St-Joseph E., 104 suite
Gbanwee 2017 BLI · Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada, NKWU NDỊ KWURU